Olee otú ịgbanwe / mmekọrịta vlcsubtitle oge?
Ndepụta okwu bụ ụzọ oké enyemaka, bụrụ na anyị nọ ná mkpa n'ihi na ụfọdụ ezi enyemaka. Otú ọ dị, ndị ọzọ ọ bụ nke enyemaka, otu ọ nwere ike ịmepụta iyatesịt bụrụ na nke igbu oge. Ọ bụrụ na ndị a ndepụta okwu na-esi nke mmekọrịta na videos, ha pụrụ ịdọpụ uche ka a ukwuu na ike ịmepụta mgbagwoju anya na-emebi zuru ezu flavor nke video. Ma ekele, e nwere ụzọ ụfọdụ aka ịgbanwe / mmekọrịta VLC Ndepụta Okwu Oge ma ọ na-adị Windows ma ọ bụ Mac.
Nkebi nke 1: ukpụhọde nke ndepụta okwu oge on Windows
Part 2: ukpụhọde nke ndepụta okwu oge on Mac
Nkebi nke 1: ukpụhọde nke ndepụta okwu na-egbu oge on Windows
Mgbe ị na-enwe a nsogbu na Windows, ị mkpa na-emeghe VLC, pịa Ngwaọrụ, mgbe ahụ, Track Ngakọrịta. Ị ga-achọta Ndepụta Okwu s / Video ngalaba.
Ọ bụrụ na, na sobtaitel na-anaghị agasi video, i kwesịrị inye a na-ezighị ezi uru 'Advance nke ndepụta okwu n'elu video' ngalaba. Were ihe atụ, na ndepụta okwu bụ n'azụ Video maka a na-egbu oge nke gburugburu 5 sekọnd odika, ị chọrọ ime na-ezighị ezi ma ọ bụ ngwa ngwa 5.000 s. Ọsọ nke ndepụta okwu a na-ejikarị gbanwee ka video. Dị pịa na tuondu iriba-ama na ị na-eme na ya. Ọ bụrụ na, gị ndepụta okwu bụ n'ihu nke video, gị mkpa iji tinye mma uru nke ahụ ego nke oge, nke nwere ike na-akpọ ka na-egbu oge na mgbe ahụ nọgide na usoro nke ume ọhụrụ. Ị bụ n'aka ịhụ kwesiri ngosi mgbanwe na gị ndepụta okwu.
Ị pụrụ ịhụ niile snapshot s maka otu, na otú ime ya na nke ukwuu ala.
Nkebi nke 2: ukpụhọde nke ndepụta okwu na-egbu oge on Mac
Na ikpe nke Mac, ihe ngwọta ahụ. Gaa na Ndepụta Okwu ntọala na ị ga-achọta oge nhọrọ dị nnọọ n'etiti. Ị nwere ike ịgbanwe ya kwekọrọ na na-enweta chọrọ results.
Ị pụrụ ọbụna na-agbalị na shortcut 'iwu H' Ọ bụrụ na, i kwesịrị Dịkwuo sobtaitel oge ma ọ bụ jiri 'Wụk G' ka ibelata sobtaitel oge. Na ma Ụzọ mkpirisi, ị na-aga adaa na chọrọ na peeji nke na ike mfe kpatụ ndepụta okwu. Ọ bụrụ na, gị ndepụta okwu bụ n'ihu nke video, i kwesịrị oge ya site kpọmkwem oge; mgbe, bụrụ na ị na-enwe na ndepụta okwu n'azụ gị video gụgharia, dị nnọọ akpali ya quicker site ego nke oge, ị na-enwe mmetụta. Ma ufodu, ị na-aga ka nwere ndị na ndepụta okwu gbanwee ka ndị kasị mma, nke mere na ị na-eche ihe ọ bụla ike mgbe na-ekiri gị video.
Ndepụta okwu bụ nnọọ ụzọ dị irè ka mma nghọta nke videos. The ukpụhọde nke ndepụta okwu e kwuru n'elu na ma ndị nyiwe na-nanị ruo nwa oge ha na mmekọrịta mere, ga-arahụ oge ọzọ, ị na-emeghe otu video. Ọ bụrụ na, ị na-achọ na-adịgide adịgide ngwọta, mgbe ahụ, nanị ihe ngwọta hapụrụ bụ ịchọta n'ụzọ zuru okè synced ndepụta okwu. Otú ọ dị, n'ihi na oge ịbụ, ị pụrụ inweta video na ya kacha mma na nke a nwa oge ngwọta nke syncing nke ndepụta okwu.
> Resource> VLC> Olee ịgbanwe / mmekọrịta VLC sobtaitel oge?